7 सर्वश्रेष्ठ Blockchain विकास Trainings, पाठ्यक्रम र प्रमाणपत्र - Blockchain समाचार
1. Blockchain विकासकर्ता प्रशिक्षण: विकासकर्ताहरूको लागि आईबीएम Blockchain फाउंडेशन
तपाईं के सिक्न हुनेछ:
तपाईं एक सफ्टवेयर डेभलपर र नयाँ हुनुहुन्छ भने blockchain गर्न, यो तपाईं को लागि पाठ्यक्रम हो. धेरै अनुभव आईबीएम blockchain विकासकर्ता समर्थकले उच्च स्तरको अवधारणाहरु वर्णन गर्ने भिडियो एक श्रृंखला मार्फत नेतृत्व गर्नेछन्, घटक, र रणनीति blockchain व्यापार सञ्जाल निर्माण. तपाईं पनि हात-मा अनुभव मोडेलिंग र भवन blockchain नेटवर्क प्राप्त साथै आफ्नो पहिलो blockchain आवेदन सिर्जना.
तपाईं सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा भने, तपाईं पूरा को प्रमाणपत्र प्राप्त. तपाईं धेरै अन्त-को-खण्ड क्विजहरू र अन्तिम परीक्षा धेरै विकल्प समावेश पारित गर्न आवश्यक छ, साँचो र झूटो, र खाली प्रश्न भर्न.
यो पाठ्यक्रम Bitcoin वा विस्तार cryptocurrency कवर गर्दैन.
2. Blockchain र Bitcoin आधारभूत कोर्स
यो सबै भन्दा राम्रो blockchain पाठ्यक्रम छ, जर्ज लेवी द्वारा सिर्जना र यो तपाईं कसरी प्रविधि काम बुझ्न बनाउने गर्दा blockchain र Bitcoin प्रमुख तत्व demystify मदत गर्नेछ. यो अन्तर्गत हुनेछ भनी एक द्रुत कार्यक्रम छ3घण्टा भन्दा बढी प्राप्त गर्न.
- Blockchain र Bitcoin छ के बारे जान्नुहोस्
- Bitcoin Miners को भूमिका, ब्लक HASHES एक Blockchain कसरी काम
- DAOs र DACs - Blockchain को मूल्य
- Bitcoins पठाउने र प्राप्त
3. रियल विश्व परियोजनाहरु निर्माण: Ethereum विकासकर्ता Masterclass
थमस र Ravinder प्रशिक्षण एक विकास परियोजना Blockchain लागि संग फिर्ता छन्. यो 10 घण्टा पाठ्यक्रम तपाईं blockchain परियोजनाहरू सिर्जना गर्न प्रयोग कार्यक्रम भाषाहरु मा सिपालु मद्दत गर्छ. सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, तपाईं यो कार्यक्रम मार्फत trainers संग वास्तविक समय परियोजनाहरू सिर्जना गर्न प्राप्त हुनेछ. तपाईं Git परिचित हुनुपर्छ, HTML, जाभास्क्रिप्ट र बूटस्ट्रैप incase तपाईं साइन अप गर्ने निर्णय.
– हामी Ethereum विकास पारिस्थितिकी तंत्र विस्तार माध्यम जानुहोस्.
– तपाईं एक पूर्ण Decentralized विनिमय निर्मित छ छौँ & Rinkeby-Testnet यो तैनाथ.
– सिर्जना & माथि भएको Ethereum Blockchain तपाईंको आफ्नो प्रारम्भिक सिक्का प्रस्ताव सुरु.
– एउटा ERC20 टोकन भएको Cryptocurrency विश्व मा के छ तपाईं ठ्याक्कै जान्नुहोस् छौँ.
4. Blockchain विकासकर्ता प्रशिक्षण : Ethereum दृढता सुरु गर्दै विकास
SEBASTIEN Arbogast पूर्ण थाक सफ्टवेयर डेभलपर, परामर्शदाता र प्रशिक्षक मार्फत 12 अनुभव वर्ष. उहाँले पछिल्लो लागि आईटी काम गरिसकेका जसले यसो Eloudrhiri संग टोली माथि 25 वर्ष.
– को blockchain र वितरण / decentralized आवेदन पछि आधारभूत दर्शन बुझ्न
– एक blockchain साधारण काम गर्दछ कसरी मूल कुराहरू, बस एक विकास मंच रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम हुन पर्याप्त
– एक वितरण आवेदन विकास, खाली परियोजना स्मार्ट अनुबंध सिर्जना उत्पादन मा परिनियोजन सबै तरिका मार्फत लेखन देखि, एकाइ तिनीहरूलाई परीक्षण, र तिनीहरूलाई लागि प्रयोगकर्ता इन्टरफेस सिर्जना
– सँगै एक लगातार विकास वातावरण राख्न सही उपकरणहरू कसरी संयोजन गर्न
– को दृढता स्मार्ट सम्झौता भाषा को आधारभूत
– को truffle गठन र परीक्षण रूपरेखा कसरी प्रयोग गर्ने
– विभिन्न Ethereum उदाहरणहरू एक decentralized अनुप्रयोग कसरी फैलिनु गर्न (testrpc, निजी श्रृंखला, परीक्षण श्रृंखला, मुख्य नेट)
5. Ethereum Blockchain विकासकर्ता: Ethereum दृढता सुरु गर्दै
Ravinder Deol र थोमस Wiesner द्वारा सिर्जना, यो डोमेन दुई प्रसिद्ध विशेषज्ञहरु, यो प्रशिक्षण सबै दृढता कार्यक्रम प्रयोग Blockchain परियोजनाहरू निर्माण बारे छ.
– यो कोर्स मा भवन परियोजनाहरु द्वारा दृढता प्रोग्रामिङ मा दक्ष हुन.
– एक सैद्धान्तिक अनि व्यावहारिक स्तरमा Blockchain प्रौद्योगिकी बुझ्न.
– कसरी स्मार्ट सम्झौता संचालन एक व्यावहारिक स्तर मा सावधान.
– संग Ethereum गरेको मेजर कोर विकास उपकरण काम गर्न सक्षम हुन.
– बुझ्न को Ethereum कोर विकास कार्य.
– हामी यो प्रविधि काम गर्दै हुनुहुन्छ रूपमा बुझ्न Decentralization के हो.
– व्यावहारिक उदाहरण माध्यम स्पष्ट को एक दृढता संरचना व्याख्या गर्न सक्षम.
– कसरी हामी सिर्जना गरिरहनुभएको परियोजना संयोजनमा Web3 प्रयोग गर्न बुझ्न.
– Truffle अनि Ethereum स्टुडियो संग विकसित विकास मा दक्ष हुन.
– अन्तिम तोकिएको कुन एउटा Ethereum Blockchain आधारित बायो डाटा हुन्छन् पूरा.
6. Blockchain प्रमाणीकरण : Blockchain for Business – Ethereum दृढता सुरु गर्दै
blockchain एक प्राइमर र वितरण लेजर प्रविधिहरू. Hyperledger रूपरेखा संग blockchain आवेदन निर्माण कसरी सुरु गर्न सिक्न.
- यो पाठ्यक्रम दुवै nontechnical र प्राविधिक दर्शकहरुको लागि उपयुक्त छ
- तपाईं उपयुक्त blockchain तपाईंको व्यापार आवश्यकताहरु लागि प्रयोग पहिचान गर्न सिक्नेछौं
- तपाईं विभिन्न blockchains को कार्यान्वयन मार्फत निर्देशित हुनेछ
- आठ हप्ता पाठ्यक्रम, एक प्रतिबद्धता संग 3-4 साथै यो सप्ताह अध्ययनको लागि आदर्श बनाउने प्रति हप्ता घण्टा
7. सिकारुहरूको लागि Blockchain कोर्स : Ethereum दृढता सुरु गर्दै
यो केवल blockchain को दुनिया एक सिंहावलोकन र परिचय प्राप्त गर्न चाहने लागि हो. एक द्रुत 1.5 घण्टा भिडियो प्रशिक्षण गर्ने आधारभूत माध्यम ले लिन्छ तपाईं यो प्रविधि बुझ्न आवश्यक.
– Blockchain प्रौद्योगिकी परिभाषित, आफ्नै शब्दमा
– कसरी Blockchain संभावित तपाईंको व्यापार र उद्योग असर गर्न सक्छ बुझ्न.
– प्रयोग अवस्थामा र Blockchain प्रविधिको उद्योग संभावित सन्दर्भमा विचार नेतृत्व टुक्रा लेख्न.
– आफ्नो ग्राहकहरु गर्न Blockchain प्रौद्योगिकी व्याख्या, मित्र, र व्यापार सहयोगिहरु
– उभरते Decentralized अर्थव्यवस्था लागि आफ्नो व्यवसाय वा आफ्नो ग्राहकहरु तयार गर्न रणनीति सेट
– अर्थशास्त्रियों को एक समुदायमा सामेल, व्यापार नेताहरूले, उद्यमीहरू, र यो प्रविधि आकार छन् technologists हामी बोल्न रूपमा.
– जो Blockchain प्रौद्योगिकी को पक्षमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक देखिन्छ पहिचान
– जहाँ blockchain मा एक मजबूत जग हिंड्न टाढा, के यसले गर्छ, र कसरी आईटी लागि तयार